Banyere Anyị - Shijiazhuang damei kingmech pump pump Co., Ltd.
Damei Kingmech mgbapụta Co., Ltd. bụ ọkachamara Chinese mgbapụta emeputa nke ulo oru nfuli. Gbaso ụkpụrụ nke ịnye ndị ahịa akụrụngwa akụrụngwa dị mkpa, ụlọ ọrụ anyị mepụtara ụdị ọgaranya nke mgbapụta mgbapụta na akụkụ, dịka nfuli slurry, nfuli API 610, nfuli kemịkal, nfuli nsị, nfuli magnetic draịva na nfuli mmiri dị ọcha. Ngwaahịa ndị a etinyere ebe niile na igwupụta ihe, imepụta ọla kọpa, na-egwupụta kol na mmepụta ihe ndị na-emepụta mmiri, ike ọkụ, inye mmiri na nsị mmiri na ọgwụgwọ na wdg. Ezigbo mma ha na arụmọrụ a tụkwasịrị obi nyeere ha aka imeri ntụkwasị obi na ihu ọma sitere n'aka ndị ahịa. Ka ọ dị ugbu a, valvụ mgbapụta dị mma na ngwa ndị metụtara ya dị maka ndị ọrụ.
Anyị factory e guzobere 2007 na kpụrụ a ọnụ ọgụgụ nke "3.13.30.300", ntụgharị, 3 mmepụta bases, 13 afọ ọgaranya ahụmahụ, 30 ọkachamara injinia, 300 -eguzosi ike n'ihe clienteles. N'ịbụ onye ọkachamara ọkachamara nwere nkà ọkachamara na-emepụta ngwa ngwa, na-akwado ma na-anwale, DAMEI toro ngwa ngwa n'afọ ndị gara aga ma mepụta akụrụngwa mgbapụta dị mma iji mejupụta mgbanwe mgbanwe nke ahịa. Ka ngwaahịa anyị na-adọta mmasị sitere n'aka ndị ahịa ụwa, anyị na-amalite ịmepụta otu ọkachamara ọkachamara nke ndị na-ahụ maka ire ahịa. Ha magburu onwe ha na nyocha saịtị na nchọpụta nsogbu, na-enyere gị aka nyocha ngwa, ntinye nfuli na moto, inye ọrụ nke usoro mgbapụta.
Isi ụlọ ọrụ nke ụlọ ọrụ anyị dị na Shijiazhuang obodo, na-ekpuchi oghere ala nke 750m2. Ugbu a, ihe karịrị ndị ọrụ aka ọrụ 20 na-arụ ọrụ ebe ahụ. Osisi atọ anyị guzobere dị na Shijiazhuang (slurry pump), Dalian (chemical pump), Shenyang (API 610 Petro-pump), nke ọ bụla na-arụpụta nfuli n'ụzọ kwekọrọ n'ụkpụrụ ISO9001, QA / QC ọkọlọtọ, CE Mark , Akara IQNet na ụkpụrụ ụlọ ọrụ ndị ọzọ dị n'ime. Ejiri osisi atọ a nwere ụlọ ọrụ ọgbara ọhụrụ ebe enwere ngwa ọrụ maka imepụta, nzukọ, ule na ndozi. Ihe omuma banyere ha bu ihe edeputara n’okpuru:
1. Shijiazhuang factory: izugbe ohere n'ala: 8000m2, Onodi: 2200m2, ndị ọrụ: 30;
2.Dalian factory: izugbe ohere n'ala: 20000m2, noo: 10000m2, ndị ọrụ: 120;
3.Shenyang factory: omumuihe: 1600m2, ndị ọrụ: 30.
4. Total: uloru: 13800m2, ndị ọrụ: 180.
Kemgbe ọ malitere, ụlọ ọrụ anyị na-agbaso ụkpụrụ nke ịnye ụdị nfuli bara ụba. Dabere na ahụmịhe afọ anyị na R&D na imepụta nfuli, anyị mepụtara ọtụtụ ụdị nfuli ọhụrụ na akụkụ, dị ka nfuli nke ihe hi-chrome na A09, Ti na Ti alloy pumps na valves, nfuli mmiri na-enweghị ntụpọ, nnukwu BB2 nfuli na ọdụ mmanu nke onwe (nke ejiri aka ya nwere Kingbury) yana carbon silicon biarin maka nfuli VS4. Dika ndi otu R & D anyi meputara otutu nsogbu di iche iche di egwu, anyi nwere ike inye nfuli ahia nke nwere ikike kachasi nke 1000kW na isi nke 1000m ma rụọ ọrụ nke ọma na ogo dị elu nke 400 Celsius. A ga-emepekwu nfuli nke nkọwapụta ka ukwuu n'ọdịnihu, na-ezute ndị ahịa 'ihe na-arịwanye elu chọrọ maka ngwa mgbapụta.
N'ihi ezigbo mma ha, ụdị ọgaranya yana arụmọrụ a pụrụ ịdabere na ya, ebupụla ngwaahịa anyị n'ahịa ndị ọzọ, dịka Canada, US, UK, France, Australia, Czech, Poland, South-Africa, Argentina, Indonesia, Philippines , Kazakhstan, UAE, Pakistan na wdg N'otu oge ahụ, anyị eguzobewo mmekọrịta mmekọrịta na ọtụtụ ụlọ ọrụ mba ụwa dịka Anglo American plc., Barrick Gold Corporation, BHP Billiton Ltd, Philex Mining Corporation, newmont africa mining Plc., KAZ mineral, Kazzinc Group na India Aluminium na Ngwuputa na Fatima Fatịlaịza Company Limited na na pụta.
Afọ itoolu gara aga agbaala mbọ dị ukwuu na mbọ anyị na R&D na imepụta nfuli na akụkụ. Agbanyeghị, na-enweghị ntụkwasị obi na nkwado siri ike, anyị agaghị enweta ihe anyị nwetara ma ọ bụ bụrụ ndị anyị bụ. Ya mere, na-abịa n'ọdịnihu, anyị ga-maa-etinyekwu mgbalị na mmepe na rụpụta nke ọzọ mma ngwaahịa na-enye ndị ọzọ na-echebara echiche na ahịa gbakwasara gị, na-aga n'ihu n'ụzọ anyị na-aga nke ọma.